ခရီးသှားလုပျငနျးအတှကျ အလောငျးတျောကဿပ အမြိုးသားဥယြာဉျနှငျ့ ဇလုံတောငျတို့တှငျ ကဘေယျကားတပျဆငျမညျ
Zawgyi Font ဖြင့် ဖတ်ရန်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အလောင်းတော်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ဇလုံတောင်တို့တွင် ကေဘယ်ကားတပ်ဆင်မည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် အလောင်းတော်ကဿပအမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်ဇလုံတောင်တို့တွင် ကေဘယ်ကားများ တပ်ဆင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင်သိရသည်။
အဆိုပါနေရာများတွင် ကေဘယ်ကားစီမံကိန်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုနည်းပါးစေမည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ ဒေသခံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းနှင့် ခရီးသွားများအတွက် သွားလာမှုလွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကေဘယ်ကားတပ်ဆင်မှုအတွက် ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ တပ်ဆင်နိုင်မှု ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းအတွက် Kaung Thit Hein Construction Co.,Ltd.ESifh Jewel Golden Elephant Construction Co.,Ltd. တို့ကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးတွင် ဖိတ်ခေါ် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
“တပ်ဆင်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကနဦး ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ထားပါတယ်။ ကေဘယ်ကားတပ်ဆင်နိုင် မယ့်ဖြစ်မြောက် နိုင်စွမ်းအလားအလာကို သုတေသနပြုလုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာပါ”ဟုစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ Jewel Golden Elephant Construction ကုမ္ပဏီသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ POMA ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်တွင် ကေဘယ်ကားတပ်ဆင်တည်ဆောက်ခဲ့သောလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကေဘယ်ကားအရှည်မှာ လေးမိုင်ကျော်ရှည်လျားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေ ကြေးပမာဏ ဒေါ်လာ၂၆ သန်းခန့်ရှိ ကြောင်း အလောင်းတော်ကဿပအမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ဇလုံတောင်တို့တွင် ကေဘယ်ကားတပ်ဆင်ပါက ယင်းထက် ခရီးမိုင်ပိုမိုရှည်လာမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏလည်းပိုများမည်ဖြစ်ကြာင်းသိရသည်။
Unicode Font ဖွငျ့ ဖတျရနျ
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး ခရီးသှားလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေနျအတှကျ အလောငျးတျောကဿပအမြိုးသားဥယြာဉျနှငျ့ဇလုံတောငျတို့တှငျ ကဘေယျကားမြား တပျဆငျရနျစီစဉျလကျြရှိကွောငျး စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့မှဇနျနဝါရီ ၈ ရကျတှငျသိရသညျ။
အဆိုပါနရောမြားတှငျ ကဘေယျကားစီမံကိနျးကို သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ပကျြစီးမှုနညျးပါးစမေညျ့နညျးလမျးဖွငျ့ ဆောငျရှကျမညျဖွဈကာ ဒသေခံမြားအတှကျအလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား ဖနျတီးပေးနိုငျခွငျးနှငျ့ ခရီးသှားမြားအတှကျ သှားလာမှုလှယျကူစရေနျ ရညျရှယျလုပျဆောငျခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ ကဘေယျကားတပျဆငျမှုအတှကျ ကြိုကျထီးရိုးတောငျတျောတှငျ ပွုလုပျခဲ့သောကုမ်ပဏီဖွငျ့ ဆောငျရှကျမညျဖွဈကာ တပျဆငျနိုငျမှု ဖွဈမွောကျနိုငျစှမျးအတှကျ Kaung Thit Hein Construction Co.,Ltd.ESifh Jewel Golden Elephant Construction Co.,Ltd. တို့ကို ဇနျနဝါရီ ၇ ရကျကတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရရုံးတှငျ ဖိတျချေါ ဆှေးနှေးမှုပွုလုပျထားကွောငျး သိရသညျ။
“တပျဆငျမယျ့ ကုမ်ပဏီတှနေဲ့ကနဦး ဆှေးနှေးမှုတှလေုပျထားပါတယျ။ ကဘေယျကားတပျဆငျနိုငျ မယျ့ဖွဈမွောကျ နိုငျစှမျးအလားအလာကို သုတသေနပွုလုပျရငျးနှီးမွှုပျနှံသှားမှာပါ”ဟုစဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့မှတာဝနျရှိသူတဈဦးကပွောသညျ။ Jewel Golden Elephant Construction ကုမ်ပဏီသညျ ပွငျသဈနိုငျငံ POMA ကုမ်ပဏီနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ ကြိုကျထီးရိုးစတေီတျောတှငျ ကဘေယျကားတပျဆငျတညျဆောကျခဲ့သောလုပျငနျး အတှအေ့ကွုံရှိသညျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ တဈခုတညျးသော ကုမ်ပဏီဖွဈသညျ။
ကြိုကျထီးရိုးတောငျတှငျ တပျဆငျထားသော ကဘေယျကားအရှညျမှာ လေးမိုငျကြျောရှညျလြားပွီး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုငှေ ကွေးပမာဏ ဒျေါလာ၂၆ သနျးခနျ့ရှိ ကွောငျး အလောငျးတျောကဿပအမြိုးသားဥယြာဉျနှငျ့ ဇလုံတောငျတို့တှငျ ကဘေယျကားတပျဆငျပါက ယငျးထကျ ခရီးမိုငျပိုမိုရှညျလာမညျဖွဈသညျ့အပွငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုပမာဏလညျးပိုမြားမညျဖွဈကွာငျးသိရသညျ။
ဗုံးဒဏ်သင့်ဂျပန်ဟီရိုရှီးမားမြို့ကိုအခြေခံသောကာတွန်းဇတ်ကားအပါအ၀င်ရုပ်ရှင် ၁၆ ကားကိုအခမဲ့ပြသမည်
Zawgyi ဖြင့် ဖတ်ရန် >>>>>>>>>
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက အနုမြူဗုံးဒဏ်သင့်ခဲ့ရသည့် ဟီရိုရှီးမားမြို့ကို အခြေခံထားသည့် In this Corner of the world ကာတွန်းဇာတ်လမ်း အပါအ၀င် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားသစ် ၁၆ ကားကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် တစ်ပြိုင်တည်းပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ၄၄ လမ်းရှိ မြန်မာဒိဌပြခန်း၌ ပြုလုပ်သည့် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂၀၁၈ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကသိရသည်။
ယင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသမည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံ၊JCGV Junction City တို့တွင်ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်မှ ၂၈ ရက်ထိလည်းကောင်း၊မန္တလေးမြို့ရှိဝင်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်ထိလည်းကောင်း အခမဲ့ ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးနှင့်ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြသမည့်ဇတ်ကားများမှာဂျပန်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ၊သမိုင်းကြောင်း၊လက်ရှိလူနေမှုဘ၀စသည်ကို ထင်ဟပ်စေသည့် ဆန်ကာတင် ရုပ်ရှင်ကား များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Unicode ဖြင့် ဖတ်ရန် >>>>>>>>>
ဗုံးဒဏ်သင့်ဂ်ပန်ဟီရိုရွီးမားမြို့ကိုအျေခခံသောကာတြန်းဇတ္ကားအပါအ၀င်ရုပ်ရွင် ၁၆ ကားကိုအခမျဲ့ပသမည်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတြင်းက အနျုမူဗုံးဒဏ်သင့်ခဲ့ရသည့် ဟီရိုရွီးမားမြို့ကို အျေခခံထားသည့် In this Corner of the world ကာတြန်းဇာတ္လမ်း အပါအ၀င် ဂ်ပန်ရုပ်ရွင္ကားသစ် ၁၆ ကားကျိုမန္မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အေရွ့တောင်အာရွနိုင်ငံမ်ားတြင် တစ်ပြိုင္တည်ျးပသသြားမည်ျဖစ်ကြောင်း ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ရန္ကုန်မြို့ ၄၄ လမ်းရျွိမန္မာဒိဌျပခန်း၌ျပုလုပ်သည့် ဂ်ပန်ရုပ်ရွင္ပြဲတော် ၂၀၁၈ သတင်းစာရွင်းလင်းပြဲကသိရသည်။
ယင်းမျွာမန္မာနိုင်ငံတြင် ပထမဆုံးအကြိမ်ျပသမည့်အစီအစဉ်ျဖစ်ပြီးရန္ကုန်မြို့နျေပည်တော်ရုပ်ရွင်ရုံ၊JCGV Junction City တို့တြင္ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိလည်းကောင်း၊မန္တလေးမြို့ရွိဝင်းလိုက်ရုပ်ရွင်ရုံတြင်ဖေဖ်ာဝါရီလ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္ထိလည်းကောင်း အခမျဲ့ပသေပးသြားမည်ျဖစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရွင္ပြဲတ္ကေျာိုမန္မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂ်ပန်သံရုံးနွင့်ဂ်ပန်ဖောင်ဒေးရွင်းတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ျခင်ျးဖစ်ပြီျးပသမည့်ဇတ္ကားမ်ားမွာဂ်ပန်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကေ်းမှု အနုပညာ၊သမိုင်းကြောင်း၊လက်ရွိလူနေမှုဘ၀စသည္ကို ထင်ဟပ်စေသည့် ဆန္ကာတင် ရုပ်ရွင္ကား မ်ာျးဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
>>>Zawgyi Font ဖြင့် ဖတ်ရန်>>>
ရန်ကုန်မှာမလုပ်ဖြစ်တာက၁၀စုနှစ်လောက်ရှိပြီ။ဒါကြောင့်အခုကပြန်လည်ဖော်ဆောင်တဲ့သဘော လည်းဖြစ်ပါတယ်"ဟုကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်ခန်းမဆောင်၌ ယနေ့ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ရန်ကုန်)ဒုတိယဥက္ကဌဦးအောင်မြင့်ကပြောသည်။
နွေးဟောပြောပေးမည်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပညာရှင်များကဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ကျောက်မျက်ရတနာများအကြောင်းဟောပြောကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
>>>Uncode Font ဖြင့် ဖတ်ရန်>>>
ရနျကုနျမှာမလုပျဖွဈတာက၁၀စုနှဈလောကျရှိပွီ။ဒါကွောငျ့အခုကပွနျလညျဖျောဆောငျတဲ့သဘော လညျးဖွဈပါတယျ"ဟုကမ်ဘာအေးဘုရားလမျး ကြောကျမကျြရတနာပွတိုကျခနျးမဆောငျ၌ ယနပွေု့လုပျသောသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ကြောကျမကျြရတနာလုပျငနျးရှငျမြားအသငျး(ရနျကုနျ)ဒုတိယဥက်ကဌဦးအောငျမွငျ့ကပွောသညျ။
နှေးဟောပွောပေးမညျဖွဈပွီးပွညျတှငျးပညာရှငျမြားကဗဟုသုတဖွဈဖှယျကြောကျမကျြရတနာမြားအကွောငျးဟောပွောကွမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရပြီး လွတ်မြောက်လာသည့် အကျဉ်းသားဟောင်းများ၏ ဘဝ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် အထွေထွေအကျဉ်းသားဟောင်းများကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (မြန်မာ)အနေဖြင့်ကူညီမည့်အကြောင်းလက်ကမ်းစာစောင်များကို အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနရှေ့တွင်ယနေ့ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
''ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ က ၂၀၁၇ ခုနှစ်က စဖွဲ့တာပါ ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်နဲ့အကျဉ်းကျခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေ။ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းတွေတတ်ချင်လား။ဈေးဆိုင်ဖွင့်ချင်စသဖြင့် သမာအာဇီဝ ကျကျလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လမ်းမှားပြန်မရောက်ဘဲသူတို့စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်း နိုင်ဖို့ကူညီပေးသွားပါမယ်''ဟု အထွေထွေအကျဉ်းသားဟောင်းများကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (မြန်မာ)မှဦးကိုနိုင်က ပြောသည်။
ယနေ့ဇန်နဝါရီလ၂ ရက် တွင် အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး လွတ်မြောက်လာသူ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၁၃၀ဦးကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က အကျဉ်းကျခံထားတဲ့သူငါးနှစ်ကကျခံထားတဲ့သူ အရင်တုန်းကလူတွေကို ကျွန်တော်တို့မကူညီဘူး လတ်တလော ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး လွတ်လာတဲ့သူတွေကိုပဲကူညီမှာပါ ။မိန်းကလေး။ယောက်ျားလေးအကုန်ကူညီပေးမှာပါ''ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အထွေထွေအကျဉ်းသားဟောင်းများကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (မြန်မာ)ကလက်ရှိတွင် အကျဉ်းကျခံပြီးလွတ်မြောက်လာသူ ၁၅ဦးခန့်အတွက်ကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
>>>Unicode Font ဖြင့် ဖတ်ရန်
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ပွဈဒဏျကခြံရပွီး လှတျမွောကျလာသညျ့ အကဉျြးသားဟောငျးမြား၏ ဘဝ ပွနျလညျထူထောငျနိုငျရနျအတှကျ အထှထှေအေကဉျြးသားဟောငျးမြားကူညီစောငျ့ရှောကျရေး (မွနျမာ)အနဖွေငျ့ကူညီမညျ့အကွောငျးလကျကမျးစာစောငျမြားကို အငျးစိနျဗဟိုအကဉျြးဦးစီးဌာနရှတှေ့ငျယနဖွေ့နျ့ဝခေဲ့သညျ။
''ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ က ၂၀၁၇ ခုနှဈက စဖှဲ့တာပါ ဘယျလိုပွဈဒဏျနဲ့အကဉျြးကခြဲ့သညျဖွဈပါစေ။ပွဈဒဏျကခြံပွီးလှတျမွောကျလာတယျဆိုရငျသူတို့စားဝတျနရေေးအတှကျ သကျမှေးဝမျးကြောငျးသငျတနျးတှတေတျခငျြလား။စြေးဆိုငျဖှငျ့ခငျြစသဖွငျ့ သမာအာဇီဝ ကကြလြုပျကိုငျနိုငျဖို့လမျးမှားပွနျမရောကျဘဲသူတို့စားဝတျနရေေးဖွရှေငျး နိုငျဖို့ကူညီပေးသှားပါမယျ''ဟု အထှထှေအေကဉျြးသားဟောငျးမြားကူညီစောငျ့ရှောကျရေး (မွနျမာ)မှဦးကိုနိုငျက ပွောသညျ။
ယနဇေ့နျနဝါရီလ၂ ရကျ တှငျ အငျးစိနျဗဟိုအကဉျြးထောငျကအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ပွဈဒဏျကခြံပွီး လှတျမွောကျလာသူ အမြိုးသား/အမြိုးသမီး စုစုပေါငျး ၁၃၀ဦးကြျောရှိကွောငျး သိရသညျ။
''လှနျခဲ့တဲ့ဆယျနှဈက အကဉျြးကခြံထားတဲ့သူငါးနှဈကကခြံထားတဲ့သူ အရငျတုနျးကလူတှကေို ကြှနျတျောတို့မကူညီဘူး လတျတလော ပွဈဒဏျကခြံပွီး လှတျလာတဲ့သူတှကေိုပဲကူညီမှာပါ ။မိနျးကလေး။ယောကျြားလေးအကုနျကူညီပေးမှာပါ''ဟု ယငျးက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။
အထှထှေအေကဉျြးသားဟောငျးမြားကူညီစောငျ့ရှောကျရေး (မွနျမာ)ကလကျရှိတှငျ အကဉျြးကခြံပွီးလှတျမွောကျလာသူ ၁၅ဦးခနျ့အတှကျကူညီပေးလကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။
နစ်နာကြေးကျပ်သိန်း၅၀၀၀ပေးလျော်ပြီးအသရေဖျက်ရေးသားမှုများ အတွက်တောင်းပန်ရန် ရွှေအိမ်စည်ကတရားဝင်ကြေညာ
အလှမယ်ရွှေအိမ်စည်က ၄င်း၏ရှေ့နေများကတစ်ဆင့် Miss Universe Myanmar Organization (MUM)၏ National Director ဒေါ်စိုးယုဝေအား နစ်နာကြေးကျပ်သိန်းငါးထောင်ပေးလျော်ရန်နှင့် အသရေဖျက် ရေးသားမှုများအား ပြန်လည် တောင်းပန်ရန် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကတစ်ဆင့် ယနေ့တရားဝင်ကြေညာလိုက်သည်။
ထို့ပြင် ၄င်း၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကလည်းသတင်းစာတွင်ကြေညာခဲ့ခြင်းအပေါ်ထပ်မံရှင်း လင်းရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“နိုဝင်ဘာလဆန်း ကတည်းက စနစ်တကျ လမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်း အကြောင်းကြားထားပြီးနောက် တရားဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူ အပြစ်ပေးရတဲ့ အဆင့်အထိ မရောက်ခင် တစ်ဖက်ကလည်း လူကြီးလူကောင်း ဆန်ဆန် သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လည် ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာကြောင့် သိရှိလိုသူတွေ မေးလာရင်တောင် ထောက်ထားပြီး မဖြေကြားဘဲ နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့ ပျက်ကွက်နေတာ စောင့်ဆိုင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် ဒီနေ့ အခုလို ကြေငြာချက်ကို သတင်းစာမှာ တရားဝင် ဖော်ပြဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို ငွေကြေးနှင့် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော်လည်း ဥပဒေအရ နစ်နာကြေး ပမာဏ တစ်ခုခု သတ်မှတ်ရစမြဲ ထုံးစံမို့ ရှေ့နေများရဲ့ အကြံပြုချက်အတိုင်း ဖော်ပြတောင်းဆိုထားတဲ့ နစ်နာကြေးကိုလည်း ဒီအမှုတွေပြီးမြောက်လို့ ရရှိလာတဲ့အခါ တရားရုံး စရိတ်နှင့်တကွ အထွေထွေ ကုန်ကျခဲ့သည်များကို ထုတ်နှုတ်ပြီး ကျန်ငွေကို လေးစားနှစ်သက်ရာ ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းများကို ခွဲဝေလှူဒါန်း သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပရိသတ်များ ပီတိ အနုမောဒနာ ကြိုတင်ပွားနိုင်အောင် တင်ပြအပ်ပါသည်” ဟု လူမှုကွန်ရက်တွင်ရေးသားထားသည်။
အလှမယ်ရွှေအိမ်စည်ကို ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲတွင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် MUMက ရွေးချယ်ထားခဲ့သော်လည်း ပြိုင်ပွဲသွားရောက်ရန် ရက်ပိုင်းအလိုတွင် Miss Grand International Myanmar 2017သရဖူကို ပြန်လည်သိမ်းယူကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Snow Photo-Shwe Eain Si
>>>Unicode ဖြင့် ဖတ်ရန်>>>
အလှမယျရှအေိမျစညျက ၄ငျး၏ရှနေ့မြေားကတဈဆငျ့ Miss Universe Myanmar Organization (MUM)၏ National Director ဒျေါစိုးယုဝအေား နဈနာကွေးကပျြသိနျးငါးထောငျပေးလြျောရနျနှငျ့ အသရဖေကျြ ရေးသားမှုမြားအား ပွနျလညျ တောငျးပနျရနျ နိုငျငံပိုငျသတငျးစာကတဈဆငျ့ ယနတေ့ရားဝငျကွညောလိုကျသညျ။
ထို့ပွငျ ၄ငျး၏ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကလညျးသတငျးစာတှငျကွညောခဲ့ခွငျးအပျေါထပျမံရှငျး လငျးရေးသားထားသညျကို တှရေ့သညျ။
“နိုဝငျဘာလဆနျး ကတညျးက စနဈတကြ လမျးကွောငျးမှနျအတိုငျး အကွောငျးကွားထားပွီးနောကျ တရားဥပဒနှေငျ့ အညီ အရေးယူ အပွဈပေးရတဲ့ အဆငျ့အထိ မရောကျခငျ တဈဖကျကလညျး လူကွီးလူကောငျး ဆနျဆနျ သိက်ခာရှိရှိ ပွနျလညျ ဖွရှေငျးပေးလိမျ့မယျ လို့ မြှျောလငျ့ခဲ့တာကွောငျ့ သိရှိလိုသူတှေ မေးလာရငျတောငျ ထောကျထားပွီး မဖွကွေားဘဲ နခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခွားတဈဖကျက ပွနျလညျဖွရှေငျးဖို့ ပကျြကှကျနတော စောငျ့ဆိုငျးဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တာကွောငျ့ ဒီနေ့ အခုလို ကွငွောခကျြကို သတငျးစာမှာ တရားဝငျ ဖျောပွဖို့ ညှနျကွားလိုကျရပွီ ဖွဈပါတယျ။မိမိရဲ့ ကိုယျကငျြ့ သိက်ခာကို ငှကွေေးနှငျ့ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျသျောလညျး ဥပဒအေရ နဈနာကွေး ပမာဏ တဈခုခု သတျမှတျရစမွဲ ထုံးစံမို့ ရှနေ့မြေားရဲ့ အကွံပွုခကျြအတိုငျး ဖျောပွတောငျးဆိုထားတဲ့ နဈနာကွေးကိုလညျး ဒီအမှုတှပွေီးမွောကျလို့ ရရှိလာတဲ့အခါ တရားရုံး စရိတျနှငျ့တကှ အထှထှေေ ကုနျကခြဲ့သညျမြားကို ထုတျနှုတျပွီး ကနျြငှကေို လေးစားနှဈသကျရာ ပရဟိတ အဖှဲ့အစညျးမြားကို ခှဲဝလှေူဒါနျး သှားမညျ ဖွဈပါကွောငျး ပရိသတျမြား ပီတိ အနုမောဒနာ ကွိုတငျပှားနိုငျအောငျ တငျပွအပျပါသညျ” ဟု လူမှုကှနျရကျတှငျရေးသားထားသညျ။
အလှမယျရှအေိမျစညျကို ၂၀၁၇ခုနှဈအတှကျ Miss Grand International ပွိုငျပှဲတှငျ သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျရနျ MUMက ရှေးခယျြထားခဲ့သျောလညျး ပွိုငျပှဲသှားရောကျရနျ ရကျပိုငျးအလိုတှငျ Miss Grand International Myanmar 2017သရဖူကို ပွနျလညျသိမျးယူကွောငျး ကွညောခကျြထုတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ရနျကုနျစတော့အိတျခြိနျးမှ အစုရှယျယာမြား အှနျလိုငျးမှတဆငျ့ ရောငျးဝယျနိုငျမညျ
အာရှကျောဖီပွိုငျပှဲတှငျ မွနျမာ့ကျောဖီဒုတိယအဆငျ့သတျမှတျခံရသောကွောငျ့ ပွညျပဈေးကှကျ ပိုမိုခိုငျမာမှုရှိလာဟု ဆို
မွနျမာ့ပထမဆုံး ကြောကျစိမျးလိုဏျဂူတျောကို ၂၀၁၈ နှဈဆနျးပိုငျးတှငျ ဖှငျ့မညျ
ကှနျဒိုဝယျယူမညျ့ နိုငျငံသား၊နိုငျငံခွားသား မညျသူမဆို အခှနျတံဆိပျခေါငျးကပျရမညျ